Ogaden News Agency (ONA) – Falastiiniyiinta oo Ku Hanjabay Inay Maraykanka Xidhiidhka U Jarayaan.
Falastiiniyiinta oo Ku Hanjabay Inay Maraykanka Xidhiidhka U Jarayaan.
Ururka Xoraynta Falastiiniyiinta ee loo yaqaano PLO, ayaa digniin ku bixiyay in uu xidhiidhka u jarayo dalka Maraykanka, haddii ay ku dhaqaaqdo tallaabada ay ku xidhayso xafiiska ururku ku leeyahay Washington.
Muuqaal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, ayaa xoghaya guud ee ururka Saa’ib Curayqaat waxa uu ku sheegay in tallaabadaasi ay tahay wax “aan la aqbali Karin”. Saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in Ururka Xoraynta Falastiiniyiinta ay suuragal tahay in joogitaankiisa iyo in Ururku kasii howlgalo Maraykanka uu jabinayo qodob sharci ah.
Sharciga Maraykanka ayaa dhigaya in mas’uuliyiinta Falastiiniyiinta aysan cadaadis ku saari karin Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah in ay baadhitaan ku sameyso gabood fallada israa’iil ee ka dhanka ah shacabka falastiin. Ururka PLO, oo ay u arkaan beesha caalamka in uu matalo dhamaan Falastiiniyiinta, ayaa xafiis ka furtay magaalada Washington sanadkii 1994.
Waa markii ugu horreysay oo waaxda arrimaha dibadda Mararykanka ay diido in ay u kordhiso ruqsad lix biloodla ah oo ururkani uga howlgalo dalkaasi.